C/kariin Xuseen Guuleed oo maanta ka qeyb galaya shirka madasha qaran ee Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
C/kariin Xuseen Guuleed oo maanta ka qeyb galaya shirka madasha qaran ee Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa lagu wadaa inuu maanta kusoo biiro shirka madasha wadatashiga qaran oo ka soconaayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kadib arrimo caafimaad darteed uu mudooyinkii dambe ugu maqnaa dalka Hindiya.
Madaxweyne C/kariin Guuleed ayaa mudooyinkii ugu dambeysay ku jiray isbitaal ku yaala dalka Hindiya, halkaasi oo qaliin dhinaca wadnaha ah looga sameeyay.
Waxaa haatan garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ka soconaysa diyaar-garoow baahsan oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, isagoona kadib ka qeyb gali doono xiritaanka shirka madasha wadatashiga qaran oo maanta lasoo gaba-gabeyn doono.
Shirka madasha wadatashiga ee ka soconaaya magaalada Muqdisho ayaa maamulka Galmudug waxaa u matalaayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamed Xaashi Carabey, balse madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa la filayaa inuu Galmudug kaalinteeda uga saxiixi doono war-murtiyeedka laga soo saari doono shirkaas.
Si kastaba ha ahaatee, shirka madasha wadatashiga qaran ayaa maalintiisi shanaad maanta galay, waxaana saacadaha soo socdo lagu wadaa in lasoo afjaro islamarkaana laga soo saari doono war-murtiyeed lagu go’aaminaayo qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta sanadkaan 2016-ka.